ग्यालेक्सी एम ३० एस नेपाली बजारमा, के के छन् विशेषता ? | Ratopati
ग्यालेक्सी एम ३० एस नेपाली बजारमा, के के छन् विशेषता ?
काठमाडौं– विश्वको सबैभन्दा ठूलो कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स र स्मार्टफोन सामसङले नयाँ ग्यालेक्सी एम स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ । आफ्नो विद्यमान ग्यालेक्सी एम स्मार्टफोनहरुको लाइनमा अब एम ३० एस पनि समावेश भएको छ ।
यसमा टाईप सी १५ वाट फास्ट चार्जर रहेको छ । ६००० एमएएचको शक्तिशाली ब्याट्री लाग्ने बाजबुत, ग्यालेक्सी एम ३० एस केवल ८.९ मीमी पातलो रहेको छ भने यसको वजन १८८ ग्राम मात्र रहको छ ।
ग्यालेक्सी एम ३० एस मा ६.४ इन्च एफएचडी + सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जो धेरै सुविधाजनक र भाइव्रेन्ट करहरुयुक्त रहेको छ । यसमा वाइडभाइन एल१ को सर्टिफिकेसन छ, जसले उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न स्ट्रीमिंग प्लेटफर्महरुमा हाईडेफिनिशिन कन्टेन्ट हेर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ ।
ग्यालेक्सी एम ३० एस मा पूर्ण नयाँ जाइनस ९६११ अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ । यसले २.३ गिगाहर्जको गति प्रदान गर्दछ । गेम खेल्दा होस् या अन्य ग्राफिक्स सम्बन्धी कार्य गर्दा उत्कृष्ट कार्य क्षमता प्रदान गर्दछ । यसमा माली जी७२ एमपी३ ग्राफिक्स प्रोसेसिङ्ग युनिट प्रयो अत्यन्त सुरक्षित रहेको छ ।
#सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स्#ग्यालेक्सी एम ३० एस